ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး | Page9| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကလေးနှာခေါင်းထဲ တစ်ခုခု ၀င်တဲ့အခါ ဘာလုပ်ကြမလဲ
15.6.2019 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
မိဘတွေဟာ ကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အထိတ်တလန့် လုပ်မိလုပ်ရာ အလုပ်တတ်ဆုံးမို့လို့ ကလေးတွေ နှာခေါင်းထဲ တစ်ခုခု ၀င်သွားတဲ့အခါ အထူးသတိပြုစရာလေးတေ...
ကိုယ့်ရဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေကို အိမ်မှာ ဘယ်လိုပြုစုစောင့်ရှောက်ကြမလဲ
14.6.2019 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
1. ထိုင်ခုံအမြင့်တေ သုံးတဲ့အခါမှာ ကလေးကို သေချာဂရုစိုက်ပြီး စောင့်ကြည့်ပေးပါ။
2. ရေချိုးတဲ့အခါမှာလည်း ကလေးကို မိမိနဲ့ လက်တစ်ကမ်း...
13.6.2019 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ချစ်မဝတဲ့ရင်သွေးလေးတွေကို စိတ်ရှည်ရှည် အသာအယာ နှိပ်ပေးခြင်းဖြင့် သူတို့ရဲ့ အာရုံကြောလေးတွေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီး သွေးလည်ပတ်အားတွေ တိုးတက...
12.6.2019 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ဝက်သက်၊ ဂျိုက်သိုး၊ ရေကျောက်ဆိုတာတွေဟာ ကလေးရှိတဲ့ မေမေတို့တိုင်းအတွက် စိတ်ညစ်စရာရောဂါတွေပါပဲနော်။ ဒါတင်မကသေးဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတွေအတွက...
11.6.2019 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
အခုခေတ်မှာ ဖုန်းတွေ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေနဲ့ချည်း အချိန်ကုန်နေကြတဲ့ ကလေးလေးတွေဟာ အပြင်ဘက်မှာ ပြေးလွှားဆော့ကစားမှု နည်းလာတာကြောင့် အဝလွန်တဲ့ကလေးေ...
6.6.2019 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
အော်တစ်ဇင် ဆိုတာကို ဖေဖေ၊ မေမေ အများစုက ကြားဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်ကတော့ အော်တစ်ဇင်ဆိုတာ အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုများ ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေတစ်မ...
လှုပ်ရှားသွက်လက်တဲ့ ရင်သွေးလေးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပျိုးထောင်
3.6.2019 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ကလေး သုံးယောက်မှာ တစ်ယောက်ကပဲ လှုပ်ရှားသွက်လက်မှုအပြည့် ရှိပါသတဲ့။ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်၊ ဂိမ်း၊ တီဗီတွေ ခေတ်စားလာတဲ့အလျောက် သူ...
1.6.2019 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ရင်သွေးလေးတွေကို မရက်စက်တတ်၊ မညှာတာတတ်တဲ့သူတွေအဖြစ် မကြီးပြင်းလာဘဲ တကယ်ဂရုစိုက်တတ်၊ ကြင်နာတတ်သူလေးတွေဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပျိုးထောင်ကြမလဲ။